Umqamelo ogqwesileyo weLatex kunye noMthengisi wokhuseleko | Rayson
Rayson kwiRayson yeNdawo yezeMizi-mveliso, eHuasha Road, eShishan, eFoshan High-Tech Zone, eGuangdong, China. Eyona mveliso iphambili yeLatex umqamelo kunye noMthengisi weqweqwe
Ukusebenza kwemveliso kuphuculwe kakhulu nguR
& D iqela.
Silandela ngokungqongqo iinkqubo zolawulo lomgangatho esemgangathweni ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu ziyahlangabezana okanye zigqithile kulindelo lwabathengi bethu. Ukongeza, sibonelela ngeenkonzo zentengiso yasemva kwexesha kubathengi kwihlabathi liphela. Ukuza kuthi ga ngoku, uRayson upasile isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho wamanye amazwe Zonke iimveliso kubandakanya imveliso yethu entsha
zinikezelwa kuyilo olutsha, umgangatho oqinisekisiweyo, kunye namaxabiso okhuphiswano. Emva kweminyaka yophuhliso, siye saseka ubudlelwane intsebenziswano ixesha elide kunye nabathengi bethu kulo lonke ihlabathi. Nceda uqiniseke ukuba sinelungelo lokuthumela ngaphandle iimveliso zethu kwaye ngekhe kubekho monakalo wenzekileyo kwimpahla ehanjisiweyo. Siyakwamkela ngokunyanisekileyo umbuzo wakho kunye nomnxeba. Ndingazifumana njani iisampulu, emva kokuba uqinisekise ngesithembiso sethu kwaye usithumela iindleko zesampulu, siya kugqiba isampulu ngaphakathi kweentsuku ezili-15 ~ ezingama-20. Ungacela inkampani yokubonisa ukuba ithathe isampuli kwinkampani yethu okanye ungasithumela i-DHL, i-FedEx okanye i-UPS yokuqokelela inombolo yeakhawunti, singathumela isampulu kuwe ngeakhawunti yakho .Ungandinceda ndenze uyilo lwethu okanye ndisebenzise logo kwimveliso? Sinako ukwenza umatrasi ngokokuyila kwakho okanye ukubonelela ngenkonzo ye-OEM sifuna nje ukuba usinike imveliso yakho yobugcisa okanye iifoto zelogo. 1. Beka ibhokisi kwindawo ethe tyaba kwigumbi lakho lokulala, tsala ngononophelo umatrasi uze ubeke ebhedini yakho.
2.Sika isikhwama sangaphandle ngononophelo ngesikere uqiniseke ukuba awusiki iplastiki embi ngaphakathi okanye umatrasi, musa ukumangalela imela. 3.Qengqa umatrasi otywiniweyo ongenamntu uyokulala ebhedini yakho 4.Yisika ngononophelo ingxowa yeplastiki ecaleni kwewotshi njengoko umatrasi uqala ukubola, Susa ingxowa yeplastiki. Vumela iiyure ezingama-24 ukuba umatrasi wakho omtsha wandise ngokupheleleyo.
Izixhobo zasekhaya Izinto zokulala Imemori ye-Foam emi-5 imimandla yoomatrasi baseColchones iMatelas
Eyona nto ibiza ixabiso eliphezulu kukunikezela umthengisi we-matnress yasentwasahlobo